ကဏ္ဍစုံ ပြခန်း: တွေးတွေးပြီးရယ်
ညချစ်သူ | 12:52 AM | ဟာသ
တစ်ခါက ခရီးသွားတစ်ဦးဟာ လူသားစားတိုင်းပြည်ရဲ့ စားသောက်ဆိုင်ထဲ ရောက်သွားခဲ့တယ်။ စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ ကြော်ငြာဆိုင်းပုဒ်မှာ ဟင်းအမည်နဲ့ဈေးနှုန်းတွေ ရေးကပ်ထားတာကို သူတွေ့လိုက်တယ်။
ဖာသာအသား = ၃ ဒေါ်လာ
မုဆိုးအသား = ၄ ဒေါ်လာ
သူဌေးအသား = ၅ ဒေါ်လာ
နိုင်ငံအကြီးအကဲအသား = ၂၅ ဒေါ်လာ
နိုင်ငံအကြီးအကဲအသားက တခြားအသားတွေထက် ဈေးကြီးနေလို့ ခရီးသွားက သိချင်စိတ်နဲ့ ဆိုင်ရှင်ကို မေးလိုက်ပါတယ်။
"နိုင်ငံအကြီးအကဲအသားက တခြားအသားထက် ဆေးကျောရတာ လက်ဝင်တာကြောင့် ပိုဈေးကြီးရတာပါ" ဆိုင်ရှင်က ပြန်ဖြေပါတယ်။
ဖခင်တစ်ဦးဟာ သားကြီးလာရင် ဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ စမ်းသပ်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ စမ်းသပ်မှုမှာ ဖခင်က စားပွဲခုံပေါ် ပစ္စည်း(၃)မျိုးတင်လိုက်တယ်။
၁ဝတန်ဒေါ်လာတစ်ရွက်---- ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင် ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
ကျမ်းစာတစ်အုပ် -------- ဘာသာရေးအကြီးအကဲ ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
ဝီစကီတစ်ပုလင်း -------- အရက်သမား ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
ဖခင်ဟာ စားပွဲပေါ်ပစ္စည်းတွေတင်ပြီး သားပြန်အလာကို တံခါးနောက်ကနေ ချောင်းကြည့်နေခဲ့တယ်။ တအောင့်နေတော့ သားဟာ လေလေးချွန်ပြီး ပြန်လာပါတယ်။ စားပွဲပေါ်က ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့တော့ ဘေးဘီကို လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ အခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်မှမရှိမှန်း သိတော့ ဒေါ်လာကိုယူပြီး အလင်းမှာထောင်ကြည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျမ်းစာကို လှန်လျောကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ ဝီစကီပုလင်းကိုဖွင့်ပြီး နမ်းကြည့်တယ်။ အဲဒီနောက် ပိုက်ဆံကို အိတ်ကပ်ထဲထည့်၊ ကျမ်းစာကို လက်မောင်းကြားညှပ်ပြီး ဝီစကီပုလင်း မ,ပြီး လေလေးချွန်လို့ ပြန်ထွက်သွားတယ်။
သားအပြုအမှုကို ကြည့်ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူ လန့်သွားတယ်။ ပါးစပ်ကလည်း စကားတစ်ခွန်း ခုန်ထွက်ပါလာတယ်။
ကုန်သည်တစ်ဦးဟာ သူ့လုပ်ငန်းကောင်းစွာ လည်ပတ်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံအကြီးအကဲတစ်ဦးကို ကားတစ်စီးလက်ဆောင်ပေးပြီး လာဘ်ထိုးသတဲ့။ ဒါပေမယ့် အကြီးအကဲက မျက်နှာမာနဲ့ "ဒီမှာ... ဒီလိုအပြုအမှုဟာ ငါ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်တယ်ဗျ၊ ဒီလိုလာဘ်ထိုးတာကို ငါလုံးဝ လက်မခံနိုင်ဘူး"လို့ဆိုတယ်။
ကုန်သည်က ပျာပျာသလဲ "ဒါကိ်ု ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ ဒါဆို ဒီလိုလုပ်ပါလား ခင်ဗျား။ ဒီကားကို(၁ဝ)ဒေါ်လာနဲ့ ကျွန်တော်ရောင်းပေးမယ်။ ဘယ်လိုလဲ?"
အကြီးအကဲ ခဏစဉ်းစားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ လွတ်တော်အဆောက်အဦး တစ်ခုထဲရောက်သွားတယ်။ လှေကားတက်ချိန်မှာ မတော်တဆ ခြေချော်ပြီး လဲကျသွားတယ်။ ဒါကို လွတ်တော်အမတ်တစ်ဦးက သွားထူလိုက်တယ်။
"ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲကျရင် ကျွန်တော့်ကို မဲထည့်ပါ"
"ခြေချော်တာက ခြေထောက်ပဲ နာသွားတာပါ။ ကျွန်မ ဦးနှောက်ကို မထိခိုက်သွားပါဘူး"
အသစ်တက်တဲ့ အကြီးအကဲတစ်ဦးက ပြောင်းရွေ့သွားရမယ့် အကြီးအကဲဟောင်းကို မေးတယ်။
"ကျွန်တော့်ကို ဘာလျှို့ဝှက်ချက်တွေများ ဝေငှာပေးခဲ့ချင်ပါသလဲ?"
"လျှို့ဝှက်ချက်က သိပ်မများပါဘူး။ ပထမတစ်နှစ်မှာ ရိုးသားကြိုးစားပါ။ နာမည်ကောင်းယူပါ။ ဒုတိယနှစ်ရောက်ရင် မသိမသာစားပါ။ လူတွေ မသိအောင်စားပါ။ တတိယရောက်ရင် စားချင်သလောက်စားပါ။ အရင်(၂)နှစ်စလုံး နာမည်ကောင်းရထားတော့ ဘယ်လောက်စားစား လူတွေ သံသယမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး"
"ဟာ... ရွှေထည့်ဖို့၊ ငွေထည့်ဖို့သေတ္တာတွေ ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာ လွန်ခဲ့တဲ့(၃)နှစ်ကတည်းကဗျ၊ ဘာဖြစ်လို့ နောက်ထပ်(၃)နှစ် ကျွန်တော်စောင့်ဦးမလဲ!"